क्रिएटिभोस अनलाइनको सम्पादकीय टीम | क्रिएटिव अनलाइन
क्रिएटिव अनलाइन सबैको लागि ठूलो समुदाय हो ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन र विकास र रचनात्मकताको प्रेमीहरू सामान्यतया, यो स्थान जहाँ तपाईं यस रोमाञ्चक संसारमा तपाईंको रुचि साझा गर्न सक्नुहुनेछ जो तपाईंको समान जोशका साथ बस्दछन्।
हाम्रो सामग्री विकास गर्न क्रिएटिभ्स अनलाइनमा एक छ डिजाइन र विकासमा विशेषज्ञ सम्पादकहरूको इन-हाउस टीम, कम्पनीहरु र डिजाइन र विकास एजेन्सीहरु मा काम को अनुभव को धेरै वर्षको साथ र क्यारियर संग सधैं रचनात्मकताको दुनिया संग जोडिएको। यस अनुभवको लागि धन्यबाद, हाम्रो वेबसाइट एक उच्च गुणस्तरको रूपमा र बाहिर खडा छ अधिक विस्तृत र कठोर सामग्री डिजाइनर र रचनात्मकका लागि विशेष वेबसाइटहरूको इकोसिस्टम बनाउन ती सबैमा। यदि तपाइँ वेबमा हामीले डील गर्ने सबै विषयहरूमा एक हेराइ लिन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो खण्ड सेक्सन प्रविष्ट गर्दै.
क्रेटिभोस अनलाइनमा हामी निरन्तर व्यावसायिकहरूको खोजी गरिरहेका छौं जसले हामीलाई यस समुदायको गुणस्तर र चाखलाग्दो सामग्री उत्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यदि तपाइँ लेखकहरूको हाम्रो टोलीको भाग हुन चाहानुहुन्छ तपाईंले भर्खरै तलका फारमहरू पूरा गर्नुपर्नेछ र हामी सकेसम्म छिटो तपाईं संग सम्पर्क मा हुनेछौं।
लेखक र सम्पादकको रूपमा डिजाइन मेरो ज्ञानको अंश हो, किनकि यो महत्त्वपूर्ण छ कि रचनाहरू दृश्यात्मक सुन्दर छन्। मलाई विज्ञापन र डिजाईनमा भएका ज्ञानहरू साझेदारी गर्न मन पर्छ जुन अरूलाई आवश्यक पर्दछ।
मेरो लागी, ग्राफिक डिजाइन सँधै यथार्थ मा तपाइँको विचारहरु लाई अनुवाद गर्न र उनीहरुलाई बढावा दिन को लागी एक उपकरण भएको छ। यस कारण को लागी, मैले Castellón de la Plana मा सुपीरियर आर्ट अफ डिजाईन (EASD) स्कूल मा ग्राफिक डिजाइन को अध्ययन गरेको छु, र वर्तमान मा मँ सबैभन्दा मनपर्ने कुरा को लागी समर्पित छु: फोटोग्राफी र ग्राफिक डिजाइन संग सम्बन्धित परियोजनाहरु को लागी। के तपाइँ तपाइँको परियोजनाहरु लाई कसरी सुधार गर्ने भनेर जान्न चाहानुहुन्छ? त्यसैले मेरो लेख पढ्न नछोड्नुहोस्।
मैले ग्राफिक डिजाइन र विज्ञापनको अध्ययन गरेको छु। म आफूलाई पुरानो चलचित्र पोस्टर, टाइपोग्राफी डिजाइन, र कमिक्सको प्रशंसक घोषणा गर्छु; मलाई टाइपोग्राफिक फन्टहरूबाट बनेको चित्रण र प्रयोगहरू मनपर्छ।
मेरो आफ्नै शैलीको साथ चित्रणको बारेमा उत्साहित, म एक इलस्ट्रेटर हुँ जसमा ESDIP मा तीन वर्षको सामान्य डिप्लोमा कार्टुन, एनिमेटेड र एनिमेसनमा प्रशिक्षणको साथ अध्ययन गरिएको छ। मेरो कल्पनालाई उडान दिन र परिणामको लागि मलाई आशाको लागि मैले माया गरेको चीज हो। म वास्तवमै डिजाइनिंगको आनन्द लिन्छु, र यदि यो साझा गर्न सक्दछु भने बढी।
कला र रचनात्मकताको बारेमा उत्कट, म एक बाध्यकारी डिजाइनर हुँ जसले प्रस्ताव बनाउने र रचनात्मक डिजाइनको संसारमा नयाँ समाधानहरूको प्रयास गर्न रमाउन चाहन्छ। यस कारणले गर्दा, म अरूको विचारहरू र सुझावहरू सुन्न चाहन्छु, र विवरणहरूबाट प्रेरणा पाउन चाहन्छ जुन मलाई आफ्नै डिजाईनहरू बनाउन मद्दत गर्दछ।
मेरो नाम पाब्लो भिल्लाबा हो म years१ बर्षको भएँ र म डिजाइनर / कलाकार हुँ। कला र डिजाइनको बारेमा उत्साहित, मैले केही वर्ष अघि पञ्चो लास्को आर्ट स्कूलमा कलाको दुनियामा आफ्नो अध्ययन सुरु गरें, यहाँबाट मैले यस क्षेत्रमा मेरो वास्तविक जोश पत्ता लगायो। मैले ला लागुना विश्वविद्यालयमा मेरो अध्ययन जारी राखें जहाँ मैले डिजाईन डिग्री डिग्री अध्ययन गरे। मँ अहिले पर्यटन क्षेत्र को लागी डिजाइन र नवीनता मा मास्टर डिग्री अध्ययन गर्दैछु। उत्तेजित, अस्वस्थ, रचनात्मक र ती सबै विचारहरू प्राप्त गर्न चाहने जुन मेरो दिमागबाट दिमागमा आउँछ।
म एक अडियोभिजुअल निर्माता हुँ यस क्षेत्रमा धेरै वर्षको अनुभव र results० भन्दा बढी परियोजनाहरू राम्रो नतीजाको साथ कार्यान्वयन। मलाई मेरो अनुभव साझा गर्न मनपर्छ ताकि हामी सबै मिलेर सिक्न सक्दछौं, किनकि म ग्राफिक डिजाइनको आनन्द लिन्छु र अरूले मैले गरेको कुरालाई पनि प्रेम गर्दा म यो अधिक गर्दछु। सृजनात्मक बन!
म एक वेब डिजाइनर र सजावट डिजाइनर हुँ, त्यसैले ग्राफिक डिजाइन म को हुँ को एक हिस्सा हो। यसको मजा लिनु भनेको मेरो पेशा हो, यति धेरै कि म मेरो प्रोजेक्टहरू सार्वजनिक गर्न एक क्षणको लागि हिचकिचाउँदिन कि जो कोही चाहन्छ, त्यसले मसँग सिक्न सक्छ।
सञ्चार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी। मेरो डिग्रीको बखत, म दृश्य संचार र ग्राफिक डिजाइन मा रुचि देखा। मुख्य डिजाइन उपकरणहरू थाहा पाउँदा मलाई मेरो सिर्जनात्मकताको शोषण गर्न र आफैलाई अभिव्यक्त गर्न मद्दत गर्‍यो। म आशा गर्दछु कि तपाईंसँग ब्ल्गमा मैले केहि बर्षदेखि सिकिरहेको कुराको बारेमा केही साझेदारी गर्ने!
म एक विशेषज्ञ हुँ र ग्राफिक डिजाइनको साथ प्रेम गर्छु। म कला, चित्रण र अडियोभिजुअल विश्वका बारे उत्साहित छु। सपना देख्न, सृजना गर्ने र प्रत्येक प्रोजेक्टको विकास भएको देख्नु भनेको केहि चीजको बारेमा म उत्साहित छु र मलाई गर्वले भर्दछ। यदि समस्या आयो भने, म जहिले पनि समाधानको खोजी गर्दछु ताकि अन्तिम डिजाइन उत्तम छ।
मैले पेशागत रूपमा ग्राफिक डिजाइन अध्ययन गर्न थाले, त्यसैले मैले मर्सियाको हायर स्कूल अफ डिजाइनमा ग्राफिक डिजाइनको डिग्री पहुँच गरेर यसलाई औपचारिक बनाउने निर्णय गरें। कलाको संसारसँग सम्बन्धित सबै कुरा सम्झन सक्ने भएकाले, रचनात्मकता र डिजाइनले मेरो ध्यान खिचेको छ। म सधैं नयाँ प्रविधि, कार्यक्रम र अनुशासनहरू सिक्न उत्सुक र उत्सुक छु।
मलाई ग्राफिक डिजाइन मनपर्दछ, विशेष गरी ग्लिफ र आइकन डिजाइन, साथ साथै मेरो खाली समयमा सम्पादन कार्यक्रमहरूको साथ टिंकरि।। आत्म-सिकाइएको हुनाले, म दैनिक प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउने नयाँ तरिकाहरू अनुसन्धान गर्दछु र मैले पहिले नै गरिसकेका मानिसहरूलाई सुधार गर्न म नि: शुल्क सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सबै गर्छु, किनकि त्यहाँ थुप्रै निःशुल्क प्रयोगका कार्यक्रमहरू छन् जुनसँग अविश्वसनीय डिजाइनहरू सिर्जना गर्ने।
एन्टोनियो एल Carretero
म एक ग्राफिक डिजाइनर, इलस्ट्रेटर र व्यावसायिक ट्रेनर हुँ, डिजाईन र भिजुअल आर्टको बारेमा उत्कट र यसको अन्य अनुप्रयोगहरु जस्तै सामाजिक डिजाइन, विज्ञापन, वा पूर्ण सांस्कृतिक सन्दर्भमा। म डिजाईनको संसारलाई आम जनताको नजीक ल्याउन मन पराउँछु, अग्रगामी परिचय-डिजाइनर र सबै समयका चित्रकारहरूको परिचय दिदै।
ग्राफिक डिजाइनर र भूगोल मा स्नातक। मैले ग्राफिक डिजाइनरको रूपमा सेल्सियानोस डे सार्रि (बार्सिलोना) मा प्रिन्ट गरिएको र मल्टिमेडिया प्रकाशनको उच्च डिग्री डिग्री सम्पादन गरेर र प्रशिक्षणले प्रशिक्षण लिएको छ। म विश्वास गर्दछु कि यस क्षेत्रमा मेरो प्रशिक्षण समाप्त भएको छैन, त्यसैले म आफैले अनलाइन पाठ्यक्रमहरू र आमने सामने कार्यशालाहरू लिएर प्रशिक्षण दिन्छु। दैनिक आधारमा प्रशिक्षण दिन यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामी लगातार परिवर्तनको संसारमा बाँचिरहेका छौं जहाँ टेक्नोलोजीहरू उफ्रिने र सीमाहरू द्वारा विकसित हुन्छन्। डिजाईनको साथसाथै, फोटोग्रालिस्टिक रेन्डरिंगहरू प्राप्त गर्नका लागि मलाई फोटोग्राफी र थ्रीडीमा मोडलि like मन पर्छ, यो क्षेत्र जुन म आफैंमा सिक्नको लागि समर्पित छु।
म फोटोग्राफी, भिडियो र एनिमेसन सम्पादनमा विशेषज्ञता दिन्छु। म ग्राफिक डिजाइन कार्यको साथ साथै ग्राफिक र अडियोभिजुअल सामग्रीको उत्पादनमा पनि रुचि राख्छु, र म संगीत, आवाज र ध्वनिको सम्पादन गर्न पनि एडोब अडिसन प्रयोग गर्छु। म सहयोग गर्न, नवीन र नवीकरण गर्न मनपराउँछु, त्यसैले म ग्राफिक डिजाइनको वरिपरि हुने भर्खरको पछिल्लो घटनाक्रमहरूको बारेमा सँधै सचेत छु।
म एक ग्राफिक डिजाइनर हुँ, र मेरो पेशे, डिजाइन, र color्ग व्यवस्थापन र विभिन्न प्लेटफार्महरूमा सिर्जना गर्ने अवसरहरूको सम्पूर्ण दायराको बारेमा भावुक छु। मेरो अनुभवमा मैले प्रिन्टरहरूबाट विज्ञापन एजेन्सीहरू, फोटोग्राफरहरू, मार्केटि coord समन्वयकर्ताहरू र प्रत्यक्ष ग्राहक सेवाको साथ काम गरेको छु, रचनात्मक र उत्पादन प्रक्रियाको एक सक्रिय हिस्सा हो। एक पेशेवरको रूपमा, म मेरो ज्ञान र अनुभवहरूको विस्तार गर्न जारी राख्छ, उत्कृष्टता र ग्राहकको सन्तुष्टिमा केन्द्रित।